Tsy sômazy teknika anefa no ao ambadik’izay, hoy izy ireo raha nandeha nitaky ny zony teny Ankorahotra omaly fa tena fampiatoana azy ireo amin’ny asany mihitsy. Taorian’ilay fitokonana notanterahin’izy ireo herinandro mahery lasa mantsy izay dia nantsoina indray izy ireo fa hiverina hisokatra ihany ny PMU Madagascar. Tsy nahatratra herinandro anefa no nanohizan’izy ireo ny asa dia tonga indray ny taratasy avy amin’ny minisitera milaza fa fanakatonana tanteraka no hampiharina amin’ity orinasa ity. Miandry izay fanapahan-kevitry ny orinasa ny amin’ny tokony handoavana ny zony ireo mpiasa miisa 800 ireo izay marihina fa renim-pianakaviana avokoa ny ankamaroany. Ny olana anefa, hoy izy ireo dia tsy mety hihaona amin’izy ireo mivantana ilay Ramatoa mpitantana ny orinasa raha voalaza fa efa lasa any am-pitandranomasina kosa ilay teratany vahiny voalaza fa tena tompon’ny orinasa. Isaky ny midify misakafo atoandro ireto mpiasa tonga mitaky ny zony vao mipoitra izy ary tsy avelany idirana ny birao, hoy hatrany ny vaovao. Manao antso avo ny amin’ny tokony handoavana ny zony reto mpiasan’ny PMU miisa 800 ireto.